नेपालमा अछुत भनेर हेपिएकी बिष्णुमाया अमेरिकामा मेयरकी सल्लाहकारसम्म ! -
नेपालमा अछुत भनेर हेपिएकी बिष्णुमाया अमेरिकामा मेयरकी सल्लाहकारसम्म !
काठमाडौं। गोरखा जिल्लाको ताक्लुङ गाविसको एउटा गरिव परिवारमा जन्मिएकी एउटी चेली जीवनमा धेरै आरोह र अवरोह झेल्दै अहिले डा. विष्णुमाया परियार बनेकी छिन् । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको अधिकार, दलितहरुको अधिकार र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको प्रर्याय बनेकी डा. परियार अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदाय मात्र होइन अमेरिकनहरुले समेत चिन्ने नाम हो । उनी हाल जर्सी सिटी मेयरकी सल्लाहकार समेत छिन् ।
न्यू जर्सी राज्यको जर्सी सिटी शहरबाट वुमन हिस्ट्री मन्थ (मार्च) को अवसरमा ‘वुमन एक्सन अवार्ड (महिला कृयाशील पुरस्कार) द्वारा सम्मानित डा. परियारको नेतृत्वमा सन् २०१५ र २०१८ मा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको लागि जर्सी सिटी काउन्सिलबाट टिपिएस रिजोलुसन पास गराउन सफल भएकी थिइन् । सन् सन् २०१७ को जुन ३० तारिख नेपाल र नेपालीको सम्मानको लागि जर्सी सिटी मेयर स्टेभन फुलपबाट अमेरिकी भूमि सिटी हलमा पहिलो पटक नेपाली झण्डा फहराउने ऐतिहासिक झण्डोत्तोलन सम्पन्न गराउन सफल भएकी थिइन् । सिटी हल भवन भित्र नेपालको झण्डा फहराउने जर्सी सिटी पहिलो अमेरिकी शहर हो ।
त्यसैगरी, जर्सी सिटी मेयर स्टेभन फुलपकी सल्लाहकार तथा दुई शहर बिचकी ईमिसरी (विशेष दूत) को रूपमा नियुक्त डा. विष्णुमाया परियारको पहल र नेतृत्वमा यसै वर्ष सन् २०१९ को जनवरी २४ तारिख अमेरिकाको जर्सी सिटी शहर र नेपालको ईन्द्रावती गाउँपालिका बिच सिस्टर सिटी बनाउने सफलता मिलेको थियो। यि दुई शहर र गाउँपालिका बिच हुने औपचारिक रूपमा सिस्टर सिटी बनाउन उनकै पहल र काउन्सिल प्रेसिडेण्ट रोलान्डो लाभारोको अगुवाईमा जर्सी सिटी काउन्सिलद्वारा गत डिसेम्वर १९ तारिख ऐतिहासिक काउन्सिल रिजोलुसन पारित गरिएको थियो।अन्य मुलुकको शहरसंग सिस्टर सिटी बन्ने ईन्द्रावती गाउँपालिका विश्वमै नयाँ नेपालको पहिलो गाउँपालिका हो।
डा. विष्णुमाया परियारले आफू संस्थापक अध्यक्ष बनेर सन् १९९८ देखि सुरु गरेको संस्था एड्वानले हालसम्म नेपालका सात जिल्लाहरुका २७ गाबिसमा स्थापित २९२ महिला समूहहरु मार्फत झण्डा ५० हजार महिला तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु र ३५ बिद्यालयहरुका २३ हजार भन्दा धेरै बालबालिकाहरुलाई बिविध सामाजिक र शैक्षिक परियोजनाहरू सन्तालन गरी लाभान्बित गरिसकेको छ ।
विश्वभरबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तराष्ट्रीय पुरस्कारहरूबाट सम्मानित भईसक्नु भएकी नेपाली सामाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारको नाममा अमेरिकाको केन्टकी राज्यको लुईभिल शहरले सन् २०१५ को सेप्टेम्वर २७ लाई ‘डा. विष्णुमाया परियार डे’ घोषणा गरी सम्मान गरेको थियो भने विश्व भरका १५५ भन्दा बढी देशहरुका न्यू योर्कमा स्थापित वाणिज्यदूतावासहरुको संगठन ‘सोसाईटी अफ फरेन कनुल्स ईन् न्यू योर्क’ ले विश्व नारी दिवस २०१८ को अवसरमा सत्र देशका नारीहरुसंगै सामाजिक अभियन्ता डा. परियारलाई सम्मानित गरिसकेको छ ।
सरकारी विद्यालयमासमेत पढ्न नसक्ने अवस्था- सरकारी विद्यालयमासमेत पढ्न नसक्ने अवस्थाबाट आफ्नो बाल्यकाल गुजारेकी डा. विष्णुमाया अहिले अधिकारको क्षेत्रमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेकी छिन् । आफू सानो छँदा दलित भएकै कारण अपमानित हुनु परेको पीडाबाट अघि बढ्ने कसम खाएकी उनले सानै उमेरमा सामाजिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् ।
डा. विष्णुमाया ठूलो परिवारमा जन्मिएकी हुन् । उनी ११ सन्तान मध्येकी पाँचौ सन्तान हुन् । गरिव परिवार त्यसमाथी ११ सन्तान । जसमा १० दिदी बहिनी र एक भाई थिए । ठूलो परिवार भए पनि उनले परिवारबाट न्यानो माया मात्र पाईनन्, जीवनमा अघि बढ्ने र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेरणा पाईरहिन्, आफ्नो बुबाबाट ।
‘विद्यालय जानु साधारण कुरा थिएन । ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै बच्चाहरु विद्यालय जान नपाउनुका कैयन कारणहरु थिए । पहिलो उनीहरु गरिब भएका कारण शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनथे । दोश्रो, जब उनीहरु –कथित दलित० विद्यालयमा जान्थे, उनीहरुलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो । जनावरको जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । मेरो सन्दर्भमा समेत म कक्षा तेजिलो विद्यार्थी नै थिएँ । तर अरु बच्चाहरुले मलाई दलित , अछुत भन्दै जिस्काउने गर्थे । तिमी किन विद्यालयमा आएको रु तिमी त कपडा सिलाउन जानुपर्ने भन्दै अपमान गर्थे । मेरो सन्दर्भमा मलाई भित्रभित्रै पीडा महसुस भएपनि मैले त्यतीबेला खासै प्रतिकृया जनाउदैनथें । मैले कहिले पनि आफूभित्रको पीडा व्यक्त गरिन । मलाई थाहा थियो उनीहरु म विद्यालय आउन छाडेको चाहन्थे । हाम्रो जातको पेशा अरुका लागि कपडा सिलाउनु थियो । त्यसैले उनीहरुले मलाई दमिनी भनेर अपमान गर्थे ।’ – बाल्यकाल सम्झिदै बिष्णुमाया भन्छिन् ।
विष्णुमायाले जव समाज बुझ्दै थिइन्, अर्थात ९/१० वर्षकी भएकी थिइन् तव उनी दलित भएकै कारण साथीहरुबाट हेपिनु प¥यो । जुन कुरा उनले बुबा आमालाई सोध्ने गर्थिन् । त्यतिबेला बुवाको जवाफ आउने गथ्र्यो– ‘छोरी यो पहिलेदेखि चलिआएको चलन हो, यो पुरानो सिस्टम हो, तिमी पढेर ठूलो भएर यसको विरुद्धमा लड्नु पर्छ ।’
बुवाको यो भनाईपछि भित्री मनै देखि यो सामाजिक कुप्रथाको विरुद्ध लड्ने कसम खाएकी विष्णुमायाले निकै मेहन गरेर अध्ययन गर्न थालिन् । उनी निकै जेहेन्दार थिइन् । विद्यालयमा कहिले पनि दोस्रो हुन नजानेकी उनी सधै प्रथम हुन्थिन् । कक्षा तीन पढ्दै गर्दा उनलाई मामा घर लगियो, त्यतिबेला उनको पढाई छुट्यो । तर केहि पछि पुनः उनी घरमा आईन् र आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिइन् ।
कक्षा सातसम्म घर नजिकैको ताक्लुङ स्कुलमा अध्ययन गरेकी विष्णुमायाले धेरै अभाव झेल्नु प¥यो । त्यतिबेला परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । बुवा आमाले ठूलो संघर्ष गरेर विष्णुमायालाई पढाउनु भयो । उनले कक्षा सातमा स्कूल टप गरेकी थिइन् । जसका कारण जेहेन्दार विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति पाएकी थिइन् । माध्यमिक शिक्षाका लागि उनी मनकामना माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भईन्, जुन विद्यालय जान दैनिक ४ घण्टाको पैदल हिड्नु पथ्र्यो । त्यहिं विद्यालयबाट उनले प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तिर्ण गरिन् ।
मनकामनामा पढ्नु विष्णुका लागि निकै फलदायी बन्यो । त्यहाँ जोन बु्रकमान भन्ने एक जना स्वयम् सेवक थिए । जो पिसकोरबाट पढाउन आएका थिए । उनै ब्रुकमानले विष्णुलाई काठमाडौं पढ्न जानका लागि छात्रवृत्ति मिलाई दिएका थिए । यद्यपी उनको अमरज्योति जनता मावि लुईटेलमा पनि नाम निस्किएको थियो । जुन विद्यालय निकै चर्चित पनि थियो । तर उनले त्यहाँ पढ्न सकिनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र घरबाट निकै टाढा भएका कारण कोठा भाडामा लिएर बस्न सक्ने अवस्था थिएन । विष्णुमाया भन्छिन्– ‘लुइटेल स्कुलमा नाम निस्किए पनि त्यहाँ पढ्न जान सक्ने आर्थिक अवस्था नभएपछि मनकामनामा भर्ना भएँ, त्यहाँबाट नै मेरो भाग्य खुलेको हो ।’
छात्रबृत्तिको आशामा काठमाडौं पढ्न गएकी विष्णुमायालाई अमेरिकाबाट रकम गएन । विष्णुमायाका लागि जोन बु्रकमानले अमेरिकाबाट पठाइदिएको रकम अर्कैले कुम्लाईदियो । उनी भन्छिन्– ‘त्यसपछि म रेष्टुरेण्टमा काम गर्न बाध्य भएँ । जतिबेला म १५/१६ वर्षकी थिएँ । रेष्टुरेन्टमा मात्र होइन गार्मेन्टमा पनि काम गरेँ । त्यसैगरी मैले मेरो पढाई खर्च जुटाएँ । एक दिन मैले जोन बु्रकमानलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँको नम्बर फोटोमा थियो । मैले भ्वाईस म्यासेज गरेँ । पछि उहाँले कलव्याक गर्नु भयो । पछि उहाँले अर्को अमेरिकन सँग पैसा पठाईदिनु भयो । जसको नाम प्यामरस थियो । उहाँलाई भेट्नु मेरो जिवनको टर्निङ प्वाइन्ट हो । उहाँ काठमाडौं मै हुनुहुन्थ्यो, जो युनिभर्सिटी अफ कलेज प्रोजेक्टको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छात्रवृत्ति पनि दिनु भयो र काम पनि दिनुभयो, रिसोर्स असिस्टेन्टको ।’
युनिभर्सिटी अफ कलेज प्रोजेक्टमा काम गर्दै गर्दा विष्णुमायाको एकजना अमेरिकनसँग मित्रता भयो, जो त्यहि कलेजमा अध्ययनरत थिए । उनै साथीकी आमा इभा कासेल विष्णुमायाका लागि भगवान बनेर आईन । जसलाई विष्णुमायाले गड मदरको रुपमा लिने गरेकी छिन् । छोरालाई भेट्न आएका बेला विष्णुमायालाई निकै मन पराएकी इभाले उनलाई अध्ययनका लागि अमेरिका ल्याइन् ।
१९९९ मा अमेरिका आएकी डा. विष्णुमायाले एक सेमेस्टर अंग्रेजी मात्र पढिन् । त्यसपछि उनलाई पाइन म्यानर कलेजले पूर्ण छात्रवृत्ति दियो । कलेजमा आएर पनि उनले टप गरिन् । उनी कलेजमा एक्सीलेन्ट पोलिटिकल साईन्स अवार्ड जित्न सफल भइन् । त्यतिमात्र होइन कलेज दिने प्रेसिडेन्ट कप अवार्डलगायत चार वटा उत्कृष्ट अवार्ड जित्न सफल भइन् । उनले त्यहिं पाइन म्यानर कलेजबाट २००४ सोसल एण्ड पोलिटिकल सिस्टममा ब्याच्लरर्स डिग्री गरिन् । अध्ययन पछि विष्णुमायाले एक वर्ष ओपिडीमा डोमेस्टिक भायलेन्स एड्भोकेटको रुपमा काम गरिन् । जहाँ उनलाई महिला हिंसा सम्बन्धि धेरै अनुभवहरु बटुल्ने र घरेलु हिंसाको बारेमा धेरै कुराहरु सिक्ने मौका मिल्यो ।
सामाजिक क्षेत्रमा डा. विष्णुमाया- डा. विष्णुमाया परियार सानै उमेरदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी भन्छिन्– ‘जव म १० वर्षकी थिएँ । मैले त्यहाँ दलितहरुलाई गरेको अपमान, छुवाछुत र महिलामाथि गरेको हिंसा नजिकबाट नियालें । हामी बच्चाहरु सँगै खेलेको बेलामा उनीहरु हाम्रो घर भित्र आउन पाउने हामी उनीहरुको घरभित्र जान नपाउने अवस्था थियो ।’
विष्णुमायाले एउटा एनजिओमा काम गर्दै गर्दा महिला र दलितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने संस्थाको आवश्यकता महशुस गरिन् । उनी भन्छिन्– ‘पद्यमकन्यामा ब्याचलर्स गर्ने वित्तिकै सन् १९९६ मा मैले काठमाडौंमा दलित महिला उत्थान संघ (एड्वन) नामक संस्था खोलेँ ।’ जुन संस्था खोल्नका लागि उनै अमेरिकन नागरिक प्यामरसले १० हजार रुपैयाँ दिएका थिए । त्यसरी खोलिएको संस्थाले अहिले नेपालमा ६ करोड भन्दा बढि सहयोग गरिसकेको छ भने भूकम्प पीडितहरुका लागि मात्रै एक लाख डलर भन्दा बढि सहयोग संकलन गरी वितरण गरिसकेको छ ।
सल बेचेर सहयोग संकलन- डा. विष्णुमायाले आफ्नी गड मदरलाई मदर्श डेको दिनमा उपहारका रुपमा एउटा नेपाली सल दिएकी थिइन् । सल दिएपछि उनले विष्णुलाई भनेकी थिइन्– ‘विष्णु यतिराम्रो सल तिमीले बेचेर फण्ड रेजिङ गर्न सक्छौं ।’ उनलाई विष्णुमायाको संस्थाको बारेमा थाहा थियो । विष्णुमाया भन्छिन्– ‘त्यसपछि हामीले नेपालबाट त्यस्तै खालका धेरै सलहरु मगाएर बेच्न थाल्यौं । सुरुमा तीन हजार, छ हजार तोकेका थियौं । पछि २८ हजार सम्ममा बेच्यौं । पछि डोनरहरु आफै आए । मेरो जागिर पनि त्यस्तै थियो । ठाउँ ठाउँमा जाने प्रिजेन्टेशन गर्ने । विभिन्न कलेजहरुमा गएर पढाउने । जसका कारण मिडियाहरुले पनि हामीलाई कभरेज दिन थाल्यो ।’
त्यतिबेला डा. विष्णुमाया परियार र उनको कामका बारेमा अमेरिकन म्यागाजिनहरुमा बाक्लै आर्टिकलहरु आउने गर्थे । जसका कारण संस्थालाई सबैले चिने । उनी भन्छिन्– ‘हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्नेहरु पनि बढ्न थाले । हामीले वर्षको दुई तीन वटा न्युज लेटर पठाउने गथ्र्यौं । क्रमशः हामीलाई निरन्तर रुपमा सहयोग गर्ने डोनरहरु बन्न थाले । हामीले वर्षको ८०/९० हजार डोनेसन गर्न सक्ने भयौं । तर यो वर्ष भूकमम्पका लागि अझै धेरै संकलन गर्न सफल भयौं ।’
महिला हिंसाको विरुद्ध र दलित अधिकारको पक्षमा अहोरात्र खटिने विष्णुमायाले संस्थाबाट भने अहिलेसम्म एक डलर पनि लिने गरेकी छैनन् । त्यतिमात्र होइन संस्थाको काममा जाँदा लाग्ने यात्रायात्र खर्चदेखि खाना खाजा खर्च पनि व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने गरेकी छिन् । यो संस्थामा काम गर्ने सबैले अहिलेसम्म स्वयम् सेवकको रुपमा सेवा गरिरहेका छन् । यो संस्थाको नेपालमा भने केही कर्मचारीहरु रहेका छन् । जसमा चार जना फुल टाईम कर्मचारी छन् भने बाँकी १५ जना फिल्ड कर्मचारी रहेका छन् ।
एड्वनको मुख्य अभियान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक उत्थान नै हो । विष्णुमाया भन्छिन्– ‘हामी महिला समुहहरु निर्माण गर्छौं । उनीहरुलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँछौं । त्यो समुहलाई ३ देखि ४ हजार रुपैया सिड मनी दिन्छौं । प्रत्येक समुहका महिलाहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार मासिक २० देखि ५० रुपैयाँ सम्म संकलन गरी त्यहि सिड मनीमा बचत गर्नुहुन्छ । त्यो रकम बढ्दै जान्छ । त्यो रकम समुहकै महिलाहरुले ऋणको रुपमा लिन पाउँछन् । त्यसमा सम्पूर्ण अधिकार उनै महिलाहरुको हुन्छ । कसले कति व्याजमा लिने भन्ने निर्णय उनीहरुले नै गर्छन् । किन भने उनीहरुलाई कसैले ऋण पत्याउदैनथ्यो । अहिले उनीहरुको आफ्नै बैंक छ । अहिले उनीहरुसँग १५ लाख सम्म बचत छ ।’
अवार्ड– डा.विष्णुमाया परियारलाई सन् २००६ मा संयुक्त राष्टसंघले ५ हजार डलरसहित ह्युमन राईट्स अवार्ड दिएको थियो । जुन अवार्ड विश्वका ६ जनाले मात्र पाएका थिए । त्यस्तै उनलाई २००७ मा वल्र्ड बैंकले ११ हजार डलर सहित अवार्ड दिएको थियो, जुन विश्वका ११ जनालाई मात्र दिईएको थियो । त्यस्तै सन् २००६ मा हाडवर्ड विश्वविद्यालयले ब्रिज विल्डर अवार्डबाट सम्मान गरेको थियो । जुन विश्वका ६ जनालाई मात्र दिइएको थियो । त्यस्तै उनलाई पाइन म्यानर कलेजले सन् २०१३ मा अनररी डक्टरेड (वियोन्ड द पिएचडी) ले सम्मान गरेको थियो ।
महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा डा. विष्णुमाया– सन् २००४ देखि लगातार महिला हिंसाको विरुद्धमा लागेकी डा. विष्णुमायाको पेशा नै डोमेस्टिक भायलेन्स एड्भोकेट हो । उनले बोस्टर्नमा एजेन्ट टास्कफोर्स एगेन्स डोमेस्टिक भायलेन्स नामक संस्थामा फुल टाईम काम गरिन् भने पार्ट टाईम नेपोक्सेट हेल्प सेन्टरमा काम गरिन् । अहिले उनी केयर पोइन्ट (जुन न्युजर्सीको दोस्रो ठूलो संस्था हो) मा आउट रिच एण्ड एजुकेटर भएर डोमेस्टिक भायलेन्स सम्बन्धि काम गरिरहेकी छिन् ।
यति धेरै सफलतापछि पनि डा. विष्णुमायामा खास माया नेपाल मै छ । उनी भविष्यमा नेपालमै जाने र महिला हिंसा र दलित अधिकारका पक्षमा काम गर्ने योजना बनाएकी छिन् । उनी भन्छिन्– ‘भविष्यमा म नेपालमै जान्छु । आफ्नै एड्वनलाई नै व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नु छ ।’
साभार – खसोखास